IRose Villa-Ba Vi-Igumbi labucala 1
Igumbi lokulala elikhulu ngaphakathi kweRose Villa-indawo yasemaphandleni ephangaleleyo, eqaqambileyo kwaye enomoya, ejikelezwe yigadi entle eluhlaza enamagqabi (enamatyholo amahle, kungoko igama le villa). Kufuphi nokhenketho oluninzi lwe-Ba Vi (umz. Ichibi laseDong Mo, ilali yeNkcubeko), iindawo zelifa lesizwe kunye neemarike zasekhaya.
Iphelele kumava asekhaya okuphumla kunye neziganeko ezifana nokuhlangana kwakhona kwesikolo / abahlobo, izakhiwo zeqela.Sinokubonelela ngokutya okumnandi kunye nokuzonwabisa okuvela kubadanisi bobuhlanga bendawo ngokwesicelo ngasinye.
Igumbi lokulala likumgangatho ophezulu kumgangatho wokuqala kwaye linegumbi lokuhlambela le-en-suite. Ubuninzi 2 iindwendwe zabantu abadala kwigumbi ngalinye. Umatrasi womgangatho unokubonelelwa ngentlawulo eyongezelelweyo (i-50k VND ngematrasi nganye ngobusuku) kusapho olunabantwana. Iindwendwe zinokusebenzisa iipani kunye neembiza ekhitshini eliqhelekileyo ukulungiselela ukutya.
Ubumelwane bubandakanya ikakhulu abantu baseMuong basekhaya, abanobuhlobo kwaye baluncedo.
Siyavuya ukukunceda ujikeleze ivilla kunye negadi, kunye nokukubonelela ngolwazi kunye neengcebiso zokuhamba / ukutyelela kwindawo yendawo. Ukongeza kwi-com Muong (ukutya kwendlela yobuhlanga), sikwabonelela ngesidlo sakusasa, isidlo sasemini, isidlo sangokuhlwa kunye nezinye izitya zepati / zesiganeko esikhethekileyo.
Siyavuya ukukunceda ujikeleze ivilla kunye negadi, kunye nokukubonelela ngolwazi kunye neengcebiso zokuhamba / ukutyelela kwindawo yendawo. Ukongeza kwi-com Muong (ukutya kwendlela…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Yên Bài